September 2020 – Kalfadhi
Guddiga maaliyadda, miisaaniyada, qorshaynta iyo la-xisaabtanka hay’adaha dowladda ee Golaha Shacabka ayaa maanta xarunta Guddiyadda ee Villa-Hargeisa, ku yeeshay kulan ajandihiisu ahaa kala war-qaadasho iyo is-wareysi. Guddoomiyaha Guddiga Mudane Maxamuud Cabdulaahi Siraaji, oo shir-guddoominayay kulanka ayaa sheegay in xubnaha ay kala waqaadasho kaddib, ay ka hadleen howlaha dhiman madaama muddo xileedka Baarlamaanka uu dhammaad ku dhowyahay. Guddiga maaliyadda, miisaaniyada, qorshaynta iyo la-xisaabtanka hay’adaha dowladda ee Golaha Shacabka ayaa todobaadkii hore kulan la yeeshay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, sidoo kale isla maalintaasi waxaa ay kulan ka yesheen dib u eegista Sharciga Hanti-dhowrka Qaranka.
Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 26-ka bishan September ansixiyey heshiiskii doorashada ee ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, maammul goboleeddada iyo gobolka Banaadir. Heshiiska Baarlamaanka ay ansixiyeen ayaa dhigaya, si aysan u dhicin firaaq ku yimaado sharciyadda jiritaanka hay’adaha Dastuuriga ah ee Dawladda Federaalka; Baarlamaanka 10-aad oo awoodihiisa Dastuuriga ah u dhammaystirantahay ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada loo soo dooratay Baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya si waafaqsan Qodobka 60aad ee Dastuurka Faderaalka iyo wax-ka-beddelka lagu sameeyey Sharciga Lr. 20 ee 27.06.2016.…
Xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiillada Dawladda Puntland ayaa gaaray degmadda Rako-raaxo ee Gobolka Karkaar halkaas oo ay ka socto dhismaha maamulka iyo Golaha deegaanka, waxaana ku soo dhaweeyay shacabka degaanka. Xildhibaanadda ayaa waxaa safarkooda shaqo qeyb ka ah Wasiirka Arrimaha Gudaha Federalka & Dimuqraadiyeynta DPL, Wasiirka Hawlaha Guud Gaadiidka & Guryeynta DPL iyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyaradda & Ciyaaraha DPL , Iyo Maamulka Gobolka Karkaar. Wafdiga Xildhibaanadda & Wasiiradda DPL ayaa lagu wadaa ka dib dhismaha Maamulka iyo Golaha degaanka degmadda Rako-raaxo inay dadweynaha ku Wacyi-geliyaan Hannaanka Geedi…
September 29, 2020 September 29, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha golaha Aqalka Sare Mudane Senatar Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa shalay daah-furay madasha aqoon-isweydaarsiga xoghayeyaasha guud ee Baarlamaannada Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka iyo Baarlaamanka Federaalka Soomaaliya. Mudane Xaashi ayaa sheegay in aqoon-isweydaarsigan oo socon doona muddo labo maalmood ah ay ujeedadiisa ugu muhiimsan ay tahay in kor loogu qaado aqoonta iyo qibradda Xoghayeyaasha Guud ee Baarlamaannada Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka iyo Baarlaamanka Federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaaahi oo furay kulan aqoon isweydaarsiga ah ayaa sheegay in loo baahan…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa xalay munaasabad isugu jirtay casha sharaf iyo isxog wareysi u sameeyay xildhibaannada iyo senatarada labada Aqal ee Baarlamaanka ee deeggaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Dowlada Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen, oo ka qeb-galay munaasabada ayaa sheegay in kuraasta qaar dadka ku fadhiya looga xaq leeyahay oo ay jiraan dad u dhintay in eheladooda oo lagu xushmeeyo. “Kuraastaan qaarkood dadka ku fadhiya waa looga xaq leeyahay, dad baa u dhintay, waa in la qadariyo laguna…
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan ku xigeenka 1aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman, ku xigeenka 2aad Mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa shir-guddoomiyay shirka 4-aad ee Guddiga joogtada ah Golaha Wakiillada Dawladda Puntland. Fadhiga maanta ee Guddiga joogtada ah oo uu hor-yimi Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda DPL Xassan Shire Abgaal ayaa wax laga weydiiyey cabashooyin ay Guddiga u soo gudbiyeen Hay’adda Horumarinta Waddooyinka DPL iyo Hay’adda Qandaraasyada iyo Iibka DPL. Cabashooyinkaas oo ku saabsanaa in aysan helin khidmadihii loogu jideeyey xeerarka ay ku dhisan yihiin kuna…
September 28, 2020 September 28, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman iyo Guddomiye ku xigeenka kowaaad Mudane Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta shir-guddoomonayay kulankii 28-aad ee Baarlamaanka Jandayaasha kulanka maanta ayaa kala ahaa akhrinta kowaad ee Hindise sharciyeedka Dhismaha Haya’adda Diiwaangalinta Dadweynaha iyo Bixinta Aqoonsig iyo akhrita koowaad ee hidise sharciyeedka Qaxootiga. Dhinaca kale xildhibaannada oo dood adag yeeshay ayaa u codeeyay heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Federalka Soomaliya iyo Jamhuuriyadda Turkiga Xildhibaannada Golaha ayaa sidoo kale akhrinta koowaad marsiiyay hindise Sharciyeedka Dhismaha Hay’adda Diiwaan Gelinta Dadweynaha iyo Bixinta…
Ra’iisul Wasaaraha JFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar kamid ah Safiirrada dalalka caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo wakiillada Qaramada Midoobay, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika. Kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin ku aaddan xaaladda waddanka iyo sidii ay u dhex mari lahayd Xukuumadda cusub wada-shaqayn dhow, isla markaana horay loogu sii wada ambaqaadi lahaa horumarrada ay dowladdu gaartay. Iyadoo kulanka ay qeyb ka ahaayeen siihayaha Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo siihayaha Wasiirka Arrimaha dibedda M. Axmed Ciise Cawad. Safiirrada ayaa muujiyay taageeradooda…
Guddigii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, ayaa maanta gaaray Magaalada Jowhar ee caasimada maamulka. Guddiga farsamada soo xulista Baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle oo 29-ka bishii lasoo dhaafay ee agoosto la magacaabay, ayaa ka kooban 11 xubnood, waxaana tan iyo markii la magacaabay ay ku sugnaayeen Mogadishu. Deegaannada Hirshabeelle ayaa dhowaan waxaa ka bilowday dhaq dhaqaaqa doorashooyinka, waxaana jiray siyaasiyiin badan oo u taagan kamid noqoshada Baarlamaanka maamulka. Guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle, ayaa dhowaan la filayaa in shaqooyinka loo igmaday ay biloobaan,…
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo maanta ka doodaya Hindise Sharciyeedka Qaxootiga
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Barlamaanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku leh Mogadishu ayaa ka doodi doona sharciyo dhowr ah, kuwaas oo dhowaan Golaha loo soo gudbiyay. Ajandayaasha kulanka ayaa kala ah akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeedka dhismaha Haya’adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-hishiisiinta Dowladda Soomaaliya. Ajandaha kale ee kulanka ayaa ah akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeedka Qaxootiga. Guddoonka golaha shacbka ayaa soo jeediyay in la dardargeliyo howlaha horyaala golaha maadaama ay Dowladda uu yahay waqti kooban isla markaan…